Rasaas Baa Qabridahare Lagu Weeraray Waxba Kama Jiraan – Rasaasa News
Rasaas Baa Qabridahare Lagu Weeraray Waxba Kama Jiraan
Jul 29, 2010 Rasaas Baa Qabridahare Lagu Weeraray Waxba Kama Jiraan
Qabridahare – [Ogaden.info] Magaalada Qabridahare ma jiraan wax habayaraatee ka dhacay, waraka lagu qorahay Internetku waa been ay baawinayaan wax magaratada ku mustaqbalka seegtay boggaga Internetka ee uu Maxamed Cumar Cismaan sida xun uga faa,iidaysanayo.
Boggagani, waxay sheegeen in uu dgaal ka dhacay magaalada Qabridahare, arintaas oo habayaraatee wax ka jiraa ayna jirin, marka laga reebo xabado habeen hore magaalada Qabridahare banaankeeda laga riday.
Waxaynu ognahay in dhulka Somalida Ogadeeniya uu muddo badan dagaal ka socday, dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee miyiga joogaana ay badankoodu hub haystaan. Hubkaas waxaa xaqiiq ah in mar marka qaarkood ay dadka haystaa shirabaan hadii ay kala iibsanayaan iyo hadii ay isleeyihiin bal ogow in qorigu wanaagsan yahay, dabadeedna laga maqlo magaalooyinka dhawaqa rasaasta ay dadku ridaa.
Waxaa iyaduna dhab in nin Jabhada oo qoriga iyo rasaastuba ay cidhiidhi ku yihiin, uusan bilaash xabad meel cidlo ah ugu ridaynin, ee uu ridi uun kolka uu isleeyahay xabadaadu cadowga ayey waxyeeli kartaa, waa hadii uu jiro. Kooxda Ina Cumar hadii ay rasaastaa dhacday ku faanayaana, waxaa dhab ah in ay budhcad argagixiso ah yihiin.
Waxaanu la hadalay Magaalada Qabridahare, waxayna sheegeen in xabado dhawaaqood laga maqlay magaalada Qabridahare habeen hore, wax intaa ka waydaarsana in ayna maqal ama arag dadweynuhu. Dadweynuhu waxay sheegeen, arimahaas waa arimo caadiyan uga dhaca magaalada hareeraheeda waayo reer miyiga ayaa hubaysan.
Qorshaha xiga ka nabada ee ay ONLF, wado ayaa laga yaabaa in dadweynaha hubka haysta loo sharciyeeyo ama ay dawladu ka iibsato.
Arimahan beenta ah, waxaa jecel in ay war ka dhigtaan kuwa buufiska ku qaaday boggaga Internetka, ee sidii ay u korfadhiyeen beena u qorayeen ku Indho iyo dhago beelay.
Runtuse waa Qabridahare wax ka dhacay ma jiraan, kuwa jecel in ay wax ka dhacaana, ha ogaadaan in laga gudbay xiligii collaada oo ay ONLF, dhex degan tahay magaalada Qabridahare.
Itobiya iyo Jabhada Somali Galbeed oo Heshiiyay
Jwxo-shiil, oo Loo Haysto Dambiyo Badan; Dil Dad iyo Gubid Hanti Dadweyne